China PVC inopikisa-inotenderera twin sikuruu extruder UA-162473191-1 vagadziri uye vanotengesa | Kupfuma Mashini
PVC inopikisa-inotenderera twin sikuruu extruder UA-162473191-1
Iyo counter-parallel twin-screw extruder yakagadziridzwa kubva kune yekutanga 18: 1 kuenda kune zvazvino 26: 1. Zvekufambira mberi kukuru kwesikirini dhizaini dhizaini uye sikuruwa yekugadzira tekinoroji, zvinodikanwa zvepamusoro zvakaiswa pane tembiricha chiyero kudzora kweiyo sikuruu .
Iyo counter-parallel twin-screw extruder yakagadziridzwa kubva kune yekutanga 18: 1 kuenda kune zvazvino 26: 1. Zvekufambira mberi kukuru kwesikirini dhizaini dhizaini uye sikuruwa yekugadzira tekinoroji, zvinodikanwa zvepamusoro zvakaiswa pane tembiricha chiyero kudzora kweiyo sikuruu . Iko kuwedzera kwehurefu hwenzvimbo yepurasitiki uye iyo equidistant yekuyera chikamu chengetedza yakatsiga extrusion uye izere plasticization yezvinhu uye nekuvandudza mhando yechigadzirwa. Kubudirira kwetafura yemapatya sikuru uye nzira mbiri dzekugadzira dhiramu zvakagadzirisa zvimwe zvikanganiso zvemakona makuru mapatya akabuda
counter-parallel twin-screw extruder yakakosha yePV zvinhu, zvePVC poda, PVC granules zvese zvinogona kushanda.kana nezvinhu zvakasanganiswa.zvakanaka kuPVC plasticization.for PVC profiles ne counter yakafanana twin sikuru ndiyo sarudzo yakanakisa. kumhanya uyu muchina kuEurope.
Kuburikidza neessessess uye nehunyanzvi hunyanzvi dhizaini uye yakanyatsogadzirirwa -kuita kwenguva refu-kuita mabhegi uye akakwirira-torque magiya anodzora, hupenyu hwakavimbika hweakadzora hunovimbiswa. Usazviomesera mubatanidzwa mamiriro inoita siyana vanoshandisa 'zvinodiwa extruder kugutsikana
Zvinyorwa zve yakafanana extruder, zvinogona kubata nesu info@zjgrcmc.com